I-Curragh Cottage nesidlo sasekuseni samahhala
Portland, Victoria, i-Australia
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Michelle
I-Curragh Cottage iyifulethi elihle lokulala elilodwa, elinombhede osofa owengeziwe, onamathiselwe ngemuva kwekhaya lethu. Azikho izimali zokuhlanza noma ezengeziwe zesivakashi. Inendawo yokupaka engaphansi futhi ihamba ngezinyawo imizuzu engu-15 ukusuka enxanxatheleni yezitolo enkulu kanye nolwandle oluhle. Ibhulakufesi lamahhala linikezwa. Siwumndeni onomoya wokungenisa izihambi othanda ukuzihambela futhi ujabulele ukuhlangana nabantu abasha. Sikhuluma isiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi nesi-Albanian futhi singathanda ukufunda ukukubingelela ngolimi lwakho lwebele! I-WiFi iyatholakala.
Ikhishi linesitofu, isiqandisi, i-microwave nezinto eziyisisekelo zasekhishini kanye nemishini. Uma ungenandaba nokuminyanisa, sinombhede wokukhempa wengane encane. Sinomtapo wolwazi omuhle wezincwadi nama-DVD ekhaya lethu owamukelekile ukuwasebenzisa ngesikhathi sokuhlala kwakho.
4.94(308 okushiwo abanye)
4.94 · 308 okushiwo abanye
Sihlala enkantolo ethule ne-RSL Bowling Club yasendaweni imizuzu emi-5 ukuya kuyo ukuze uthole ukudla, noma imizuzu eyi-15 uma ungena edolobheni ukuze uthole ezinye izinketho zokudla. Kuyimizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo ukuya echibini lendawo ukuze uhambe ngokuthula nokubuka izinyoni, imizuzu eyi-15-20 ukuya ogwini kanye nenkundla yokudlala enkulu, imizuzu engu-15 uhamba ngezinyawo ukuya e-Botanic Gardens enhle kanye neminyuziyamu ehlukahlukene. Ibhishi elidumile laseBridgewater kanye nehlathi eligcwele amathafa liyimizuzu eyi-18 ukusuka lapho.
Ababungazi bahlala endaweni eseduze futhi bayathanda ukukhuluma nabantu nokwabelana ngolwazi lwethu lwendawo, noma zizwe ukhululekile ukujabulela indawo yakho ngendlela othanda ngayo.